HOOS KA DAAWO SHIRKII DIGIL IYO MIRIFLE | Anti-Tribalism
← Gardarrada Gaas oo laga wada gilgishay!
MAXAAD KALA SOCOTAA WAXYAALAHA UU XAMBAARSAN YAHAY DASTUURKA PUNTLAND. →
HOOS KA DAAWO SHIRKII DIGIL IYO MIRIFLE
Buraanburkaan ayaa waxaa loo tiriyey Dr.Cali Wardheere Dooyow oo kamid ah waxgaradka soomaali Maay oo kunool dalka dibadiisa gaar ahaan Wadanka Australia.
Faadumo Maxamed Isaaq “Faadumo Arlaadi” oo kamid ah Gabdhaha Qurba joogta ah ee Soomaalida Kunool wadanka America gaar ahaan GobolkaColumbus, Ohioayaa Xiriir ay lasoo sameysey Aaandhoorey.com Baidoanews wakaalada BANA waxay sheegtey inay dhageysatey Qudbadii Dr.Cali Wardheere Dooyow oo uu ka jeediyey Shirkii DM ee London horaantii Febraayo kadibna ay go’aan satey Inay U Buraan Burto.
Faadumo Arlaadii Waa Gabar Geesiyad ah oo inta badan isku howliso difaacida Magaca DM guud ahaan iyo ku hadlitaanka Afka MAAY oo ay sheegtey iney aragto ayadoo meelo badan ay dhalinyero isugu timaado lagu liido Afkeeda laakiin ay ka xigto in wax laga sheego Afkeeda geeri.
Faadumo Arlaadii Waxay Soo Wadaa Buraan buro badan oo ay ku buraarujineysa dadkeeda gaar ahan dhalinta soo koreysa kuwaasoo ay ugu hadli doonto xadgudubyada loo geysto shacbiga DM, kuwa lagu xasuuqayo Puntland, kuwa Dhulkooda la boobayo, kuwa Gaajada udhimanaya, kuwa Xabsiyada ku jiro, kuwa Afkooda la liido, kuwa ku rafaadsan Qurbaha iyo kuwo kale.